Soo dejisan VueScan 9.5.58 – Vessoft
Soo dejisan VueScan
VueScan – software shaqaynaysa in ay la shaqeeyaan scanners. VueScan taageertaa ku dayashada ee scanners ee shirkadaha kala duwan, oo ay ku jiraan Canon, Epson, Nikon, Microtek, Polaroid iwm software ayaa si weyn u ballaarinaya u shaqeeya, xaddidan ka mid ah darawallada caadiga ah ee Qalabka ugu. VueScan khusaysaa diirada kuu ogolaanaysa inaad soo afaysto, ka saar goobtii iyo midabo adaanaha ee image asalka ahaa. Software waxuu si meesha looga saaro cilado in images isticmaalaya taan ku infrared oo ay ka saareen qaylada scanner ah. Sidoo kale VueScan kuu ogolaanaya in aad si loo badbaadiyo macluumaadka marsiiyey si file ah oo u shaqeeyo ayadoo scanner ah.
Extension fursadaha markii la scanners shaqeeya
Taageerada moodooyinka kala duwan ee scanners
Keydinta xogta si file ah
VueScan Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... Zeus Internet Marketing Robot 4.2.44